AlmaLinux 8 - LinuxCapable တွင် Xfce Desktop ကို ထည့်သွင်းနည်း
CentOS 8 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
CentOS9တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု
မူလတန်း OS ကို
Ubuntu ကို 20.04 LTS
Ubuntu ကို 22.04 LTS
ပေါ့ပ်!_OS 20.04 LTS
AlmaLinux 8 တွင် Xfce Desktop ထည့်သွင်းနည်း
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 18, 2021 by ယောရှုယာကုပ်
Operating System ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။
EPEL Repository ကို ထည့်သွင်းပါ။
Power Tools Repository ကိုဖွင့်ပါ။
AlmaLinux တွင် Xfce ကို ထည့်သွင်းပါ။
Xfce Desktop ကို ပထမဆုံးကြည့်ရှုပြီး အတည်ပြုခြင်း
Xfce Desktop Packages များကို အပ်ဒိတ်လုပ်နည်း
Xfce သည် UNIX နှင့်တူသော လည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက် ပေါ့ပါးသော အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် ဒက်စ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လည်ပတ်မှုစနစ်အများစုဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးသည့် ပုံသေ desktop ပတ်၀န်းကျင်များထက် အမြင်အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်ချိန်တွင် စနစ်ရင်းမြစ်များအပေါ် မြန်ဆန်ပေါ့ပါးစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Xfce သည် ဟာ့ဒ်ဝဲပါရှိသော စနစ်အဟောင်းများတွင် အလွန်ရေပန်းစားပြီး ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းတွင် မှတ်ဉာဏ်နှင့် CPU လည်ပတ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်ပါ Tutorial တွင် သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ AlmaLinux ဒက်စ်တော့တွင် Xfce ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အကြံပြုထားသော OS- AlmaLinux ၈.
သုံးစွဲသူအကောင့်: အသုံးပြုသူအကောင့်နှင့်အတူ sudo အထူးအခွင့်အရေးများ or root access (su command).
သင့်ရဲ့ဒိတ်လုပ်ပါ AlmaLinux လက်ရှိ ပက်ကေ့ဂျ်များ အားလုံးကို ခေတ်မီကြောင်း သေချာစေရန် လည်ပတ်မှုစနစ်
ကျူတိုရီရယ်ကို အသုံးပြုပါမည်။ sudo အမိန့် နှင့် သင့်တွင် sudo အခြေအနေရှိနေသည်ဟု ယူဆပါ။.
သင့်အကောင့်ရှိ sudo အခြေအနေကို အတည်ပြုရန်-
sudo အခြေအနေကို ပြသသည့် နမူနာ အထွက်-
ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် sudo အကောင့်အသစ်ကို စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ခန်းစာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ AlmaLinux တွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား Sudoers သို့ထည့်နည်း.
အသုံးပြုရန် root အကောင့်လော့ဂ်အင်ဝင်ရန်၊ root စကားဝှက်ဖြင့် အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
Xfce ဒက်စ်တော့ကို မတပ်ဆင်မီ ၎င်းကို မကြိုက်ပါက နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုပါက အရန်များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များကို ဖန်တီးပါ။ Desktop Environment တစ်ခုခုကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ရှုတ်ထွေးနေပြီး စနစ်မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ကျပန်းထည့်သွင်းထားသည့် အပလီကေးရှင်းများကို ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် အသစ်နှင့် ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူအတွက် ပက်ကေ့ဂျ်များကို မထည့်သွင်းမီ မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
သင့်တွင် အနည်းဆုံး စနစ်ရင်းမြစ်များ မရှိပါက၊ ဒက်စတော့ ပတ်ဝန်းကျင်များစွာရှိခြင်းသည် သင့်စနစ်အား အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ မကြာခဏဆိုသလို လူတွေမှာ အများအပြားရှိကြပြီး အချင်းချင်းကြားမှာ ကူးပြောင်းသွားကြပါတယ်။
ပထမတာဝန်မှာ EPEL ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ (လုပ်ငန်း Linux အတွက် အပိုပက်ကေ့ခ်ျ) သိုလှောင်မှု။ ဤသိုလှောင်မှုတွင် Red Hat Enterprise တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော ပက်ကေ့ဂျ်များ ရှိသည်။ (RHEL).
သင်၏ terminal ကိုဖွင့်ပြီး အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
Y အမျိုးအစား၊ ထို့နောက်နှိပ် ကီးထည့်ပါ။ installation ကိုဆက်လုပ်ရန်။
ထို့နောက် သင့်စနစ်တွင် ရရှိနိုင်သော ပက်ကေ့ဂျ်အဖွဲ့များကို အတည်ပြုပါ။
KFCE ကိုမတပ်ဆင်မီ ဒုတိယတာဝန်မှာ ပါဝါကိရိယာများသိုလှောင်ရာကို ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ပုံမှန် Linux ပက်ကေ့ဂျ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများ၊ Red Hat Enterprise Linux အတွက် yum နှင့် SUSE Linux Enterprise ဆာဗာအတွက် zypper ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စနစ်က လိုအပ်သည့် အစီအစဥ်အတိုင်း သင်လိုအပ်သော ပက်ကေ့ဂျ်များကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းနိုင်စေပါသည်။
သင်၏ terminal တွင် အောက်ပါ command ကို ကူးယူပြီး အသုံးပြုပါ။
ထို့နောက် repository ကို အသုံးပြု၍ ဖွင့်ထားသည်ကို အတည်ပြုပါ။ dnf repolilist အမိန့်.
ယခု သင်ခန်းစာ၏ နောက်အပိုင်းသို့ ဆက်သွားပြီး Xfce ကို ထည့်သွင်းပါ။
လိုအပ်သော repositories များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ သင်၏ AlmaLinux 8 စနစ်အတွက် အစားထိုး desktop ကို ယခု စတင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
ပထမဦးစွာ၊ သင်၏ terminal တွင် Xfce ရရှိနိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ယခု Xorg ဖြင့် Xfce desktop ကို install လုပ်ပါ။
တပ်ဆင်ခြင်းသည် ကြာရှည်မခံသင့်ပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲအဟောင်းများနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော အင်တာနက်ပေါ်တွင်၊ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
ထို့နောက်၊ အောက်ဖော်ပြပါ command ကို အသုံးပြု၍ ပုံသေပစ်မှတ်စနစ်ကို ဂရပ်ဖစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။
ပြီးသည်နှင့် သင့် system ကို reboot လုပ်ပါ။
သင်၏ desktop ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည်သင်၏ login screen သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ပထမဦးစွာ၊ သင်သည် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ လက်မှတ်ထိုးဝင်ရန် ခလုတ်ဘေးရှိ ဖွဲ့စည်းမှုခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့နောက်ကို select “Xfce Session” default အစား "စံ။"
အကောင့်ဝင်ပြီးသည်နှင့်၊ ထင်ရှားသောအရောင်နှင့် နောက်ခံပြောင်းလဲမှုများအပြင် UI ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ကို သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ယခု Taskbar သည် အချိန်ပြသသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်နှင့် ညာဖက်ထောင့်ရှိ ပေါင်းစပ်မှုများနှင့်အတူ နောက်ထပ် windows အမျိုးအစား taskbar နှင့် ဆင်တူပါသည်။
တပ်ဆင်မှုကို အတည်ပြုရန်၊ တပ်ဆင်ရန် အသုံးဝင်သော ပက်ကေ့ခ်ျမှာ Neofetch ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အစောပိုင်းတွင် သင်ထည့်သွင်းခဲ့သည့် EPEL သိုလှောင်မှုတွင် ရောက်ရှိလာပါသည်။
ဤပက်ကေ့ဂျ်ကို ထည့်သွင်းရန် သင့် terminal တွင် အောက်ပါ command ကို အသုံးပြုပါ။
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် သင့် terminal တွင် အောက်ပါ command ကို run ပါ။
ဒါပါပဲ၊ သင့် AlmaLinux 4.16 လည်ပတ်မှုစနစ်မှာ XFCE 8 desktop ကို အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။
App Stream မှ default packages များနှင့်အတူ Xfce ဒက်စ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အနာဂတ်အပ်ဒိတ်များအတွက် စံ dnf အဆင့်မြှင့်သည့်အမိန့်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။
အပ်ဒိတ်များရရှိနိုင်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာတွင်၊ သင်၏ AlmaLinux 8 လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် Xfce ဒက်စ်တော့ပတ်၀န်းကျင်ကို မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် Xfce မှ နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုများနှင့်အတူ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ သင့်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော စနစ်တစ်ခုရှိပါက သင့်စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်၍ ဤပက်ကေ့ဂျ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး လှည့်ပတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် desktop ခုန်ခြင်းကို နှစ်သက်ပါက၊ ရုပ်ထွက်သည် သင့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ မသေချာပါက သင့်ပင်မစက်တွင် VM ကို ဦးစွာထည့်သွင်းရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား AlmaLinux Tags: AlmaLinux ၈, Xfce ဒက်စ်တော့ပတ်ဝန်းကျင် post navigation
Debian 10.7 Bullseye တွင် MariaDB 11 ကို ထည့်သွင်းနည်း
Rocky Linux 8 တွင် KDE Plasma Desktop ကို ထည့်သွင်းနည်း
Facebook ကတွစ်တာRSS ကို
© 2022 LinuxCapable အခွင့်အရေးအားလုံးကို လက်ဝယ်ရှိသည်။
လိုဂိုများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် ပညာရေးအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဒေတာ သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အာမခံ သို့မဟုတ် လျော်ကြေးပေးခြင်း မရှိပါ။